Wararka - Ballanqaadka kordhinta isticmaalka kheyraadka waara
Ballanqaadka kordhinta isticmaalka kheyraadka waara
Kordhi isticmaalka kheyraadka waara
Dhammaan badeecadaha iyo qalabka wax lagu duubo, iyagoo u beddelaya agab waara, waxay yareeyaan culeyska deegaanka, waxay yareeyaan abuurista qashinka iyada oo loo marayo meertada nolosha ee badeecooyinka, la yareeyo isticmaalka saliidda dabiiciga ah, waxayna gacan ka geysaneysaa xaqiijinta bulsho wareegsan.
Yaree isticmaalka biyaha, xooji maareynta bullaacadaha iyo qashinka,
Marka la eego dhibaatooyinka halista ah ee sii yaraanaya kheyraadka biyaha iyo tayada biyaha oo xumaanaya, waxaa ka go'an yareynta xaddiga biyaha looga baahan yahay wax soo saarka iyo howlgalka, iyo yareynta culeyska deegaanka ee dheecaanka wasakhda.
Yaree cabbitaanka biyaha adoo xoogga saaraya waxtarka biyaha oo dib u isticmaal goobaha wax soo saarka meelaha dhibaatooyinka biyuhu ka jiraan.
· Raac heerarka shirkadda u gaarka ah ee ku saleysan sharciyada iyo qawaaniinta dowladda iyo heerarka warshadaha sida ZDHC (Zero Discharge of Khatarta Maadooyinka Kiimikada) iyo hirgelinta maaraynta biyaha wasakhda ah dhammaan goobaha wax soo saarka.
Maareynta iyo yareynta walxaha kiimikada
Si loo hubiyo nolol hodan ku ah jiilalka soo socda, shirkaddu waxay yareysaa saameynta iyo culeyska kiimikada ee deegaanka.
· Iyada oo ku saleysan heerarka warshadaha sida MRSL (Liiska Waxyaabaha Xaddidan ee Waqtiga Waxsoosaarka) oo ku saleysan ZDHC (Sii daaya Sunta Maaddooyinka Kiimikada Khatarta ah), maareynta adeegsiga walxaha kiimikada ee dhammaan dhinacyada hannaanka wax soo saarka laga soo bilaabo ilaa iyo si loo sii yareeyo isticmaalka walxaha kiimikada.
· U hogaansanaanta xeerarka warshadaha sida Heerka 100 ee shirkadda Oeko-Tex si looga takhaluso isticmaalka maaddooyinka xaddidan ee ku jira alaabta.
Samee habab wax soo saar oo cusub si loo yareeyo qiiqa kiimikada waxyeelada leh.
In la ixtiraamo xuquuqda aadanaha lana ilaaliyo jawi shaqo oo cadaalad ah oo nabdoon
Waxaan qiimeynaa fikradda guud ee ixtiraamka sharafta iyo xuquuqda dadka oo dhan waxaanna gacan ka geysaneynaa bulsho kala duwan oo waarta.
Iyada oo loo marayo aqoonsiga iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha ee dhameystiran